मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा के के फाइदा
काठमाडौं । आजभोली ईन्टरनेटको जमाना छ । त्यसकारण अश्लिल चलचित्र हेर्दै नहेरेको पुरुष भेट्न त गाह्रो नै पर्छ । तपाई पनि हेर्नुहुन्छ होला । अश्लिल चलचचित्र हेर्ने पुरुषका सम्बन्धमा एउटा
डण्डीफोर आम समस्या हो । यसले अनुहारको सुन्दरता बिग्रन्छ कि भनेर मानिसहरू चिन्तित हुन्छन् । डण्डीफोर निको भए पनि दागको रुपमा यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ। डण्डीफोरलाई चाँडो निको बनाउने धुनमा
काठमाडौं । हस्तमैथुना पुरुष महिला सबैले गर्छन तर धेरैलाई थाहा हुँदैन कसरी गर्ने भन्ने । पुरुषले आफ्नो लिङ्ग खेलाएर अस्त मैथुन गर्ने कुरा त धेरैलाई थाहा छ । पुरुषलाई जस्तो
सेक्स एउटा यस्तो चीज हो जसको इच्छा प्राय सबैमा हुन्छ । एउटा उमेर लागेपछि सेक्सप्रति जो कोहीको रुची जान्छ । उमेर पुगेपछि शारिरीक सम्बन्ध बनाउनका लागि युवा युवतीहरु तयार हुन्छन्
लेलेका वडा अध्यक्ष सिल्वाल जुटे सरसफाईमा
नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर । बज्रबाराही नगरपालीका–५ का वडा अध्यक्ष मिलन सिल्वाल सरसफाईमा जुटेका छन् । वडा अध्यक्ष सिल्वालको अगुवाईमा तिलेश्वर मन्दिर परिषरमा रहेका ज्ञानकुण्ड मन्दिर र मन्दिरसँगै बग्ने खोलाको सरसफाई
मनोज रेग्मी, काठमाडौ । के हो स्वाइनफ्लु ? स्वाइनफ्लु भनेको मौसमी रुघाखोकी (सिजनल फ्लु) एक प्रकार हो। रुघाखोकी बिग्रिएर यसले असर गर्न सक्छ। रुघाँखोकी लाग्ने बित्तिकै डराउनुपर्दैन। तर, सावधान भने
भगवती तिमल्सिना स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र २०७२ को संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आम जनताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्ने योजना सहित स्वास्थ्य मन्त्री गिरीरामणी पोखरेलले आइतबार २६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र
पर्सा,(नेस) । पर्साको शंकरसरैया–५ मा घरमा सुतिरहेकी एक महिलाको कोठामा पसेर जर्वजस्ती करणी गर्न खोजेको आरोपमा सोहि ठाउँका ४२ वर्षीय दयाराम महतो थारु पक्राउ परेका छन् । साउन २० गते
भगवती तिमल्सिना स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालमा जति धेरै उपलब्धि भए उत्तिकै नयाँनयाँ रोग भित्रने र चुनौती थपिने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। नेपालमा लामो समयदेखिको प्रयासले पछिल्लो समय मलेरिया (औलो) उन्मूलनका
काठमाडौं । अरु बेलामा भन्दा जाडो समयमा नेपालीहरु बढी चिया पिउँछन्। अधिकांश मानिसहरुले आनन्दको लागि, शरीर न्यानो गराउनको लागि चिया पिउने गर्छन्। फेरि चियाको (कालो चियाको) स्वास्थ्यमा फाइदाहरू पनि टन्नै
विवाहपछि प्रत्येक दम्पतिको एउटा स्वाभाविक सपना हुन्छ– घरमा बच्चाको हाँसो गुन्जियोस् । तर चाहँदा–चाहँदै पनि सबैको यो सपना पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन । कुनै–कुनै महिलाले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् । यस्ता
बसिरहेका बेला पनि त्यतिकै हातगोडा बाउँडिन्छ ?
एजेन्सी । मानिसमा हात–गोडा बाउँडिने समस्या निम्तिने कारण र समाधानका उपायबारे सुझाब यस्ता छन् : शरीरमा इलेक्ट्रोलाइज भन्ने एउटा तत्व हुन्छ । शरीरमा त्यो तत्वको ब्यालेन्स नमिल्दा हात–गोडा बाउाडिने समस्या देखापर्छ
एजेन्सी – धेरैजसो महिलाहरु शरीरमा आउने अनावश्यक रौं हटाउनको लागि विभिन्न किसीमका विधिहरुलाई अपनाउने गर्दछन् । अनुहारमा आउने रौंहरु नाङ्गो आँखाले देख्ने हुदाँ यसले अनुहारको सौन्दर्यतामा समेत कमी ल्याउँदछ ।
महिलाले विवाह अगाडि यौनसम्पर्क राखे र नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए र नआएको वा दुखे र नदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र
रमाइलो वा प्रेमको मुड बनाउन खानाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्राचीनकालदेखि नै युवायुवतीले यौन उत्तेजना बढाउने खालका विशेष खानेकुरा खान्थे । बेरी, फिग्स, महले यौन शक्ति बढाउने भन्दै यसको
चिकित्सा शिक्षामा योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
डा. केसी अनशन बस्ने भगवती तिमल्सिना चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका ठोस मागहरू राखी पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै असार ३१ गतेको अल्टिमेटम दिनुभएको
अनिल बोगटी नेपालमा गर्भवती र नवजात शिशुको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रगति हुँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले नियमितरूपमा पुर्याएको योगदानलाई यस्तो प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले
सरकारलाई गिज्याउँदै मासु जाँच ऐन
रोशन पराजुली⁄हेटौंडा सरकारले राजधानीबाहिर ‘स्लटर हाउस’ चलाउनेलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। ‘स्लटर हाउस’ नहुँदा नागरिक दूषित मासु खान बाध्य भएकाले मासु बजार विस्तारका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो।